Owegqomu nengoma entsha | News24
Owegqomu nengoma entsha
Sinethemba Sibisi.ISITHOMBE: sithunyelwe
UMCULI wegqomu nophinde abe ngumdidiyeli wezingoma aphinde ngumbhali wazo uSinethemba Sibisi nowaziwa ngo ‘Mreyza Harris’ emculweni ukhiphe ingoma yakhe entsha esihloko sithi ‘eThekwini’ kanti uthi uzimisele ukuhambela sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal ekhulisa le ngoma.
USibisi (25) ongowokuzalwa KwaMashu kodwa ozinze kakhulu eMgungundlovu ngenxa yomculo uthe kungokokuqala ukuba akhiphe ingoba yakhe yedwa bengelona iqembu seloku aqala ukukhipha umculo ngonyaka wezi-2013.
Ekhuluma ne-Echo uthe ujabulile ukuthi naye agcine esekwazi ukukhipha ingoma yakhe nalapho epike khona uMadanon.
“Kumanje ngimatasatasa ngilungisela umcimbi woku yethula ngokusemthethweni le ngoma kati futhi bengifuna ube ngesikhathi sikaZibandlela (December). Ngifuna ukuhambela wonke amadolobha akhona esifundazweni saKwaZulu-Natal ngikhulisa le ngoma ukuze abantu bezoyithanda ngoba ngizimisele ngokuthi ngikhiphe i-album yami yokuqala ngonyaka ozayo wezi-2019. Ukuze kodwa konke loko kuphumelela kumele ngenze isiqiniseko sokuthi abantu bayawuthanda umculo wami ingako kubalulekile ukuthi ngibahambele.Ngifuna ukuphinde ngikhiphe nama- music video amabili futhi ngawo unyako ozayo ukujabulisa abalandeli bami,” kubeka yena.
USibisi uthe waqala ukubona ithalente lakhe loku bhala kanye nokucula ngesikhathi esasesikoleni betshelwe ukuthi kumele benze into ewubuciko kwezinye zezifundo.
“Ngangingazi ukuthi ngozkwenzani ngizoqalaphi ngoba ngangikwazi ngisho ukudweba loku. Ilapho ke ngavele nganquma ukuthi ngizibhalele ingoma yami bese ngicula yona. Ngamangala kakhulu ngoba ngavele nagthola wonke amamaki nokuyilapho engabona khona ukuthi kusho ukuthi ngionalo ithalente lokubhala izingoma ngicule futhi. Kusukela lapho angibange ngisabheka emuva kuze kube imanje.
“Ngakhetha ukuchula umculo weGqomu iyona into ekade yaziwa kakhulu lapho ngikhulele khona kwazise ngikhulele elokishini. Ingako ngakhetha into engizokwazi ukuthi mangiyiqala ithandwe abantu ikakhulukazi lapho ngisuka khona ngoba ibona abaqala ukungeseka.”
USibisi usesebenze nabaculi abaningi abaziwayo okubalwa kubona Vetkuk and Mahoota kwi-album yabo ya-2018, Busiswa, Lady Zamar kanye nabanye.
Ingoma yakhe isiyatholakala kuma-iTunes kanye naku-MTN Callertunes.